Fampahafantarana isan-trano - Sekolin'ny Fiteny Afovoany, Cambridge
Homestay sy Accommodation
Ny fijanonana amin'ny trano eo an-toerana dia hevitra tsara satria afaka mampihatra ny teny anglisy ianao mandritra ny andro. Hikotraka sy hanampy anao ireo mpampiantrano anao, raha miara-miasa amin'izy ireo ianao.
Izahay dia manolotra tapany-board trano fandraisam-bahiny fandriana sy sakafo maraina or lakozia kely.
Samihafa ny homestay: fianakaviana manana zanaka, mpivady efa lehibe na olon-tokana. Mifanaraka amin'ny etika ao amin'ilay sekoly dia mikendry ny hametraka ireo mpianatra miaraka amin'ny trano fonenana kristiana izahay.
Hanana efitrano iray ihany ianao (misy ihany koa ny efitrano kambana roa ho an'ny mpivady). Indraindray mety misy mpianatra hafa an-trano avy any an-kafa.
Mariho fa tsy afaka mandamina afa-tsy ny trano fonenana ianareo raha mianatra amin'ny fianarana amin'ny teny Anglisy na Intensive, fa tsy amin'ny fianarana tapa-potoana.
Efitrano fonenana mpianatra amin'ny Jolay sy Aogositra
Fa Jolay sy Aogositra fotsiny manolotra efitra fandraisam-bahiny mikarakara tena izahay 5 minitra mandeha an-tsekoly avy ao amin'ny sekoly ao amin'ny tranobe YMCA. Ny efitrano tsirairay dia samy misy
fandriana tokana misy fandriana
paosy lehibe ho an'ny akanjo
vata fampangatsiahana / vata fampangatsiahana lehibe
Hizara efitra fandroana, lakozia ary efitrano fandroana miaraka amin'ny mpianatra hafa ianao. Misy ihany koa ny fanatanjahan-tena amin'ny trano, sy ny foibe fanaovana fanatanjahan-tena sy ny dobo filomanosana eo an-baravarana.
Ahitana sakafo maraina sy sakafo hariva ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ary ny sakafo rehetra amin'ny faran'ny herinandro.
Anisan'izany ny sakafo maraina saingy tsy maintsy manana sakafo hafa ianao ao amin'ny trano fisakafoanana na any amin'ny cafe.
Manana efitrano ao an-trano miaraka amin'ny fianakaviana ianao ary mahandro sakafo ao an-dakoziany.
Ny mpianatra sasany dia mandamina ny toeram-ponenany ao na akaikin'i Cambridge.